I-HDMI 2.1 kunye ne-HDMI Alt esemgangathweni yokuphehlelelwa kwi-CES 2017 | Iindaba zeGajethi
Sele siqala ukuba neendaba malunga ne-CES elandelayo eLas Vegas kwaye kule meko sijongane nokufika kweenkcukacha ezimbini ze-HDMI 2.1 kunye ne-HDMI Alt, kulo msitho ubalulekileyo. Inyani yile yokuba abavelisi abaninzi babheja namhlanje Uhlobo lwe-C amazibuko ohlobo lwe-USB, kwaye kule meko i-HDMI Alt esemgangathweni ababhengeze ngayo ngo-Septemba ophelileyo iyakwazi ukusebenza nolu nxibelelwanoke akukho sidingo sokukhathazeka malunga neeadaptha ezikweli zibuko kwaye le yinto ekufuneka igcinwe engqondweni.
Ukufika kwezi nkcukacha zimbini kuvula iingcango ezintle kwividiyo yedijithali enganyanzelwanga ebhaliweyo kunye nesandi, kodwa eyona ilunge kakhulu, banemisebenzi efanayo nonxibelelwano lwangoku olongeza ukudlala i4K okanye ividiyo ye3D, Isiteshi se-HDMI Ethernet (HEC), isandi se-ARC kunye neDolby Surround. Umanyano phakathi kwe-HDMI kunye namazibuko ohlobo C lwe-C uyasondela.
Kwelinye icala sikwanokufika kwe-HDMI 2.1, eya kuthi ihambelane ngokupheleleyo nemethadatha enamandla ye-HDR. Oku kukuvumela ukuba ulungelelanise ngokuzenzekelayo kwiiparameter zomfanekiso ezahlukileyo I-tv ene-HDMI 2.1 kunye nokujonga ngoku. Konke oku nokunye okuninzi kuzakwenziwa ngokusesikweni nangeenkcukacha ezinkulu kwi-CES yalo nyaka izayo eyenzeka ekuqaleni kukaJanuwari nalapho ngokuqinisekileyo siya kuba neendaba ezibalulekileyo ezinxulumene nalo mgangatho. Lonke ulwazi malunga nale HDMI Alt inokufumaneka ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi ye HDMI.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-HDMI 2.1 kunye ne-HDMI Alt Standard yokuSungulwa nge-CES 2017